Sideen Ugu Beddelayaa Qoraalka Turjumaadda Luqadda Wordpress? - Liiska Faylka fudud
Maqaalkani wuxuu ku qoran yahay WordPress plugin; Liiska Faylka Fudud maskaxda ku hay, laakiin waxay si isku mid ah u khuseysaa inta badan plugins-yada kale sidoo kale.
Liiska Faylka Fudud wuxuu ku qoran yahay Ingiriis, laakiin wuxuu taageeraa luuqado badan oo dheeri ah. Anigu kuma hadlo wax ka badan hal luqad, sidaa darteed waxaan ku kalsoonahay barnaamij si aan u bilaabo oo markaa aan uga caawiyo adeegsadayaasha dhabta ah ee naxariista ku filan gudbi sixitaan.
Mararka qaarkood tarjumaadda mashiinku waxay noqon kartaa mid cabsi badan. Markaa haddii aad rabto inaad wax ka beddesho mid ka mid ah xargaha tarjumaadda ee bartaada, waxaad ku sameyn kartaa tan si cadaalad ah si fudud naftaada. Xitaa waad u abuuri kartaa turjumaad cusub gebi ahaanba luqadaha aan hadda la taageerin.
Cusbooneysiinta Xarig Tarjumaad
Tarjumaadaha waxaa lagu keydiyaa labo feylal oo ku yaal galka faylka Liiska Faylka Fudud. Hal feylood waa mid la aqrin karo aadanaha, kan kalena waa luuqadda mashiinka. Waxaad u baahan doontaa inaad furto feylka la akhrin karo (.po), wax ka bedel qoraalka, ka dibna aad sameysato feylal cusub oo luqadda mashiinka ah (.mo)
Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa barnaamij. Waan isticmaalaa oo waan kula taliyaa Poedit. Waa u bilaash baahiyahaaga.
1) Adoo adeegsanaya barnaamijka aad jeceshahay ee FTP ama maareeyaha faylkaaga martigeliyaha ah, u gudub galka luuqadaha ee faylasha tarjumaadda lagu keydiyo:
Goobta Nooca Bilaashka ah
wordpress / wp-content / plugins / fudud-file-liistada / luqadaha /
Goobta Pro Version
wordpress / wp-content / plugins / ee-fudud-file-liiska-pro / luqado /
2) Download ka .po feyl ka kooban tarjumaadda luqaddaada. Ogsoonow in magacyada faylka ay adeegsadaan qaab luqadeed iyo degaan. Faransiis Faransiis ah lama mid aha Faransiiska Faransiiska.
3) Fur feylkan adoo adeegsanaya Poedit.
4) Hoos ugu deg xariga (qoraalka) aad rabto inaad wax ka beddesho oo aad gujiso.
5) Isbedelkaaga ku samee sanduuqa weyn ee cad ee shaashadda hoose.
6) Keydso faylka. Poedit si toos ah u abuuri doonaa ah .mo gudbiso.
7) Soo rar labadan feylood ee cusub, adigoo si xad dhaaf ah u qoraya feylasha jira.
8) Dib u cusbooneysii boggaaga oo dib u eeg isbeddelladaada. Hubso inaad nadiifiso kaydadkaaga haddii aadan arkin inay isbeddeladaadu muuqanayaan.
Ii soo dir isbadaladaada.
Haddii xarig tarjumaad khaldan yahay, Ii soo dir Faylashaada cusub. Waxaan ku dari doonaa isbadaladaada sii deynta xigta. Haddii kale isbeddeladaadu dib ayey ugu noqon doonaan cusbooneysiinta soo socota.
Abuuritaanka Tarjumaad Cusub oo WordPress ah
Haddii luqaddaada aan hadda la taageerin, waad isticmaali kartaa Poedit si loo abuuro turjumaad cusub.
1) Adoo adeegsanaya barnaamijka aad jeceshahay ee FTP ama maareeyaha faylkaaga martigeliyaha ah, u gudub galka luuqadaha halkaasoo ah .Dheri feylka tarjumaadda waa la keydiyay:
wordpress / wp-content / plugins / fudud-file-list / luqado / fudud-file-list.pot
wordpress / wp-content / plugins / ee-fudud-file-liiska-pro / luqado / ee-fudud-filel-ist-pro.pot
2) Soo qaado feylkan kuna fur Poedit.
3) Dhagsii badhanka Abuur Tarjumaad Cusub kadibna dooro luqadaada. Tani waa inay u dhigantaa waxaad dhigatay hoosta WordPress> Settings> General si aad firfircoon u noqotid.
4) Poedit waxay ku siin karaan talo bixinno mashiin ah oo aad ku bilaabi karto. Laakiin haddii aad ku hadasho luqadda, waxaad xaqiiqdii u baahan doontaa inaad ku dhex marto xadhkaha khadadka-khadka oo aad adigu u turjunto.
5) Keydi feylkaaga tarjumaadda adoo adeegsanaya qaabka jira, adigoo hubinaya in magaca faylka ku lifaaqan uu u dhigmo luqaddaada. The .mo file si toos ah u badbaadi doonaa sidoo.
6) Soo rar .po iyo .mo faylasha galka luuqadaha galka. Dib u soo celi bogagga oo dib u eeg tarjumaadahaaga.
Ii soo dir faylashaada cusub. Waxaan ku dari doonaa sii deynta soo socota. Haddii kale feylashaada cusub ayaa tagaya cusbooneysiinta soo socota.